> Resource> iPod> iPod emetụ ndabere extractor: Wepụ Backups nke iPod aka 5/4
Olee otú m na-agụ m niile data na iPod aka ndabere faịlụ?
M nwere iTunes ndabere faịlụ m iPod aka 4 na kọmputa. Ugbu a, m mkpa iji họrọ ma na-agụ na ndetu na ya. Enwere ụzọ na ike ka m na-eme ya? Kedu? Biko gwa m!
N'ihi na ụfọdụ na-akpọ nche, Apple adịghị ekwe ka onye ọ bụla na-agụ iTunes ndabere faịlụ. Ị pụrụ nanị weghachi ya na gị na ngwaọrụ, na price ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ na-enye niile data ugbu a na ngwaọrụ gị. Ozi ọma bụ na ị ka nwere ike ịchọta ụzọ nweta gị iPod aka ndabere ma ọ bụrụ na ị na-agbalị.
iPod aka ndabere extractor maka Windows ma ọ bụ Mac
Enweta ihe iPod aka ndabere extractor arụnyere na kọmputa gị, na i nwere ike mfe na-agụ gị iPod emetụ ndabere faịlụ. A Windows version ma ọ bụ a Mac version, ọ na-adabere gị. Ebe a bụ extractor: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows). Unu nwere obi abụọ ọ bụla. Ma nke iPod aka ndabere extractor omume bụ oké pụrụ ịdabere na nchebe, na ike wepụ niile data gị iPod emetụ ndabere faịlụ.
Download iPod aka ndabere extractor n'okpuru. The ikpe mbipute bụ ree.
Ọzọ, ka ego otú iji iPod aka ndabere extractor wepụ gị ndabere faịlụ na-niile ọdịnaya si na ya na Windows version. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ọ na-adịghị mkpa. Ị ka pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru na-yiri nzọụkwụ.
Olee otú iji iPod aka ndabere extractor wepụ gị iPod emetụ ndabere faịlụ
Nzọụkwụ 1. Họrọ gị iPod aka ndabere
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị tupu eme ihe ọ bụla ọzọ. Mgbe ahụ gị niile iTunes ndabere faịlụ ga-akpaghị aka scanned na depụtara na usoro si window n'okpuru. Họrọ onye na maka gị iPod aka 5/4, na pịa Malite iṅomi; wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. Wepụ gị iPod emetụ ndabere ọdịnaya
Ị mkpa na-eji sekọnd ole na ole na iṅomi. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihuchalu gị niile data na nkwado ndabere na mpaghara na window n'okpuru. Họrọ ndị ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ugbu a ị na-aga nke ọma okokụre adịrị gị iPod emetụ ndabere faịlụ.
Rịba ama: I nwekwara ike nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac)) ka kpọmkwem ike iṅomi ngwaọrụ gị, na-data na ngwaọrụ gị na ndị na-ehichapụ-adịbeghị anya.